Vanochera Zvicherwa Vokurudzira Kupihwa Marezenisi eKutengesa Kunze kweNyika
MASVINGO — Vagari vekuMasvingo vanoti hurumende inofanirwa kupa marezenisi okutengesa zvicherwa kunze kwenyika kuvanhu vanoita basa rekuchera zvicherwa kuitira kuti vanhu ava vawanewo mari iri nani, uye kuti hurumende iwanewo mari kubva pamitero yainobata. Mashoko aya ataurwa pamusangano wekuzeya hurongwa hwebhajeti regore rinouya.
Vachipa pfungwa dzavo pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya, sangano rinoona nezvekucherwa kwezviwanikwa munyika kuMasvingo, re Small Scale Miners Association, vakumbira hurumende kuti ivape marezinesi okutengesa zvicherwa zvavo kunze kwenyika.
Sangano iri rati nhengo dzaro dziri kurasikirwa nemari yakawanda kubva kuvanhu vari kutenga zvicherwa zvavo nemitengo iri pasi pasi, asi vanhu ava vachizotengesa zvicherwa izvi nemari iri pamusoro soro.
Sachigaro vesangano remighodi midiki kuMasvingo, VaJoseph Maringwanda, vati ivo kana vakakwanisa kutengesa zvicherwa zvavo kunze kwenyika, vachawana mari yakawanda, izvo zvinozoitawo kuti nyika ibudirire.
Vashandi vehurumende vapinda mumusangano uyu, vatiwo hurumende inofanirwa kuwedzera mari dzavanotambira. Vashandi ava varatidzawo kushushikana kukuru nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamari dzavo dzemabhonasi. Vashandi vehurumende vakapa hurumende masvondo maviri ekuti igadzirise nyaya dzemihoro, ikasaita izvi vanenge vopinda mukuratidzira. Masvondo maviri aya ari kukwana svondo rino.
Vanoona nezvemabasa ehurumende kuMasvingo, kana kuti Provincial Administrator, VaFelix Chikovo, vati ivo vanofara nokuti hurumende gore rino yakakwanisa kupa dunhu ravo mari yokuvaka dhamu re Tokwe Mukosi kuMasvingo.
VaChikovo vatiwo pane mabasa mazhinji ehurumende kuMasvingo asina kuzobudirira nepamusana pekushaikwa kwemari.
Vachitaurawo pamusangano uyu, munyori mubazi rezvemari, Va Willard Manungo, vati hurumunde iri kutarisira kushandisa mari inoita mabhiriyoni matatu nemazana masere emamiriyoni emadhora mubhajeti regore rinouya. VaManungo vati mari iyi ichange yakawanda kudarika ichashandiswa nehurumende gore rino.
VaManungo vati mari inowanikwa nehurumende ishoma zvikuru zvokuti vacharamba vachisarudza zvirongwa zvekushandisa mari vachitarisa kukosha kwechirongwa chimwe nechimwe.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vanotarisirwa kutura hurongwa hwemari hwegore rinouya muparamende nemusi wa 15 Mbudzi gore rino.